बढ्यो सुनको मूल्य, कति छ आजको मूल्य ? - नेपाल कुरा
बढ्यो सुनको मूल्य, कति छ आजको मूल्य ?
काठमाडौं । आज नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार तोलामा ८७ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन बुधबार बढेर तोलामा ८८ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको हो ।
नेपाल बैंकद्धारा सातै प्रदेशलाई ५-५ लाख सहयोग
गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन